Unqatshelwe ibheyili osolwa ngokwakha itulo lokubulala umyeni | News24
Unqatshelwe ibheyili osolwa ngokwakha itulo lokubulala umyeni
Johannesburg - Amaphoyisa aseLimpopo abophe owesifazane oneminyaka engu-37 ubudala kanye nesoka lakhe okusolakala ukuthi liyinkabi, ngezinsolo zokubulala uthisha, uDaniel Ramaipadi, kubika iSteelburger News.
URamaipadi wadutshulwa wabulawa ngamadoda angaziwa ngomhlaka-22 Julayi nonyaka ngesikhathi efika kwakhe eGa Motodi Village. Kulesi sigameko kwebiwa nemoto yakhe, kodwa yatholakala ngemuva kwezinsuku ezimbili eGa Mashamothane Village, eduzane nasenkundleni yezemidlalo.
Umufi ubenguthisha esikoleni iManoke High.
"Unkosikazi kamfowethu wazama ukubheca ngobubende amalungu omndeni ngokubulala kodwa wahluleka," kusho ilungu lomndeni kamufi, igama lalo eligodliwe.
OLUNYE UDABA:Ubulale umyeni obesekhathele ukubangelwa isicefe ngesoka
"Ngemuva kwalokho wabaleka nempahla kamfowethu okubalwa kuyo nefenisha ngemuva komngcwabo. Siyabonga emaphoyiseni esifundazwe ngokumthola siyathemba ukuthi kuzokwenzeka ubulungiswa ngokufa kukamfowethu."
Ngesonto eledlule amaphoyisa abopha unkosikazi kamufi, uGlenrose Vuyelwa Ramaipadi.
Ngokusho kwalowo okhulumela amaphoyisa uLieutenant-Colonel Moatshe Ngoepe, lo wesifazane usolwa ngokwakha itulo nesoka lakhe lokuba kuthengelwe umyeni wakhe inkabi.
UGlenrose ube esevela eNkantolo yeMantshi yasePraktiseer ngoLwesithathu ngecala lokubulala wanqatshelwa ibheyili.
Labo abasolwa ngokusebenzisana naye, uSewisha 'Nomvethe' Mphego, 42, okusolwa ukuthi uyisoka lakhe noRichwell Moeng, 34, 'oyinkabi', nabo banqatshelwe ibheyili kuyo le nkantolo.